जनकलाकार विष्णु खत्री र सजना बास्तोलाको सरकार के गरेर खाम ? सार्वजनिक - Prime News Nepal
जनकलाकार विष्णु खत्री र सजना बास्तोलाको सरकार के गरेर खाम ? सार्वजनिक
देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध नभएकाले वाध्य भएर प्रत्येक दिन लगभग दुईहजारसम्म युवाहरु कामको खोजीमा खाडी मुलुकहरुमा जाने गरेको सरकारी तथ्याङकहरुले देखाउँछन्। खुला सीमाना पार गरी कति युवा, युवती कामको खोजीमा भारत गइरहेका छन् भन्ने त कुनै लेखाजोखा नै छैन। विदेशमा ‘थ्री डि’ कामहरुमा लाखौँ युवाहरु संलग्न रहेका छन् । तर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेबारे भने खासै काम भएको देखिँदैन ।
लोकसङ्गीत क्षेत्रमा रूचाइएका गायक÷सर्जक खत्रीले सयौँ गीतमा स्वर दिएका छन्। शब्द रचना र भाका निर्माणमा पनि उनी उत्तिकै पोख्त छन्। यो गीत यसको द्योतक हो । उनले गीतमार्फत विकृति, विसङ्गती, गरिबी, उत्पीडन, अभाव र छुवाछुत जस्ता सामाजिक मुद्दालाई उठान गर्दै आएका छन्। उनका ‘भरिया दाइ’, ‘अन्तरजातीय विवाह’, ‘कि लास चाहियो, कि सास चाहियो’ र ‘जम्मु कश्मिरमा’ लगायत गीत चर्चित छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म दर्जनौं गीतमा स्वर दिइसकेकी उनी गीत रचनामा पनि दक्खल राख्छिन् । लोक, पप, आधुनिक, गजल, भजन देखि डान्सिङ सबै शैलीका गीतमा उनले स्वर दिएकी छन्।
गायक तथा सर्जक खत्रीले नागरिकहकको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबाट सरकार जहिल्यै भाग्ने गरेको भन्दै आमजनताको तर्फबाट सरकारलाई उक्त वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दै गीत सिर्जना गरेको बताए । “देशमा हुने भ्रष्टाचार,अन्याय, अत्याचार बढदो महँगी, कालोबजारी बिरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै भोका, नाङ्गा, गरिब, दिनदुःखी, असहाय, निमुखा, हुँदा खाने वर्ग, श्रमजिवी,उत्पिडीत, बेरोजगारी जनताको जीवन कथामा आधारित गीत हजुरहरु माझ लिएर आएका छौं।” खत्रीले भने “नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य,शिक्षा र रोजगारीको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले बिनम्रतापूर्वक आम जनताको तर्फबाट सरकारलाई उक्त वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छौं ।”